Ogaden News Agency (ONA) – Inshaar iyo koox dabaqoodi ah oo soo galay KA iyo JOKA oo ku raadjoogta
Inshaar iyo koox dabaqoodi ah oo soo galay KA iyo JOKA oo ku raadjoogta
Inshaar Maxmed Doolaal oo ka mid ahaa gacanyareyaasha gumaysiga Itoobiya ee wadanka South Africa uga hawl gala ayay dad xogtiisa la socda sheegeen inuu isku dayay inuu wadanka Koonfur Afrika ku soo laabto isagoo safar baxsad ahaa ku tagay Addis Ababa daba yaaqadii sanadkii tagay.
Inshaar oo ka mid ah qabqableyaasha gumaysiga sida aadka ah u horbooda isla markaasna dambiyo kala duwan wadankaa Koonfur Afrika ka gaystay aya horay wadankaas loogu xidhay isagoo loo haystay dambiyo ay ka mid tahay inuu dad shacab ah si ula kac ah u xabadeeyay. Inshaar oo in mudo ah xabsi ku jiray ayaa markii xabsigaas si damiin ah loogaga sii daayay wuxuu u cararay dhinaca Addis Ababa wuxuuna mudo ku maqnaa gudaha Itoobiya. Wararka xogogaal ah een helnay ayaa waxay sheegayaan inuu bishan horaanteedii ka soo dagay Garoonka caalamiga ah ee magaalada Johannesburg hasa ahaate dib loogu celiyay Addis Ababa oo uu ka soo duulay.
Wararku waxay intaas ku darayaan in sharcigii uu S/Africa ku joogay laga qaaday lagana kansalay. Ninkan ay cadaawadda ka buuxdo ayaa wuxuu balan ku lahaa maxkamada 18ka bishan oo aanu soo xaadirin. Maxakamada ayaa waxay u jirtay (arrest warrant) ama Xadhig mar alaale markuu yimaado.
Warar hoose ayaa xaqiijinaya inuu 19.4.2011 yimid wadanka Zimbabwe halkaasoo uu joogay afar maalmood, ka dibna uu maanta soo galay Johannesburg isagoo ku soo galay dhuumaal oo gaadhi xamulka qaada lagu soo dhumiyey. Sida muuqata safaaradda Itobiya ayaa aad ugu dadaashay inay ninkan si kastaba ku soo galiso dalka.
Waxaa sidoo kale soo gaaray magalada Johannesburg koox daba qoodhi ah kuwaaso laga soo diray magalda Adisababa. Waxay wararku intaa ku darayaan in ay caawa jiifan hotel safarada Itoobiya u dhaw. Si kasa taba ha ahaatee jaaliyadda JOKA oo weerere lagu soo qaaday ayey ka go’an tahay inay iska difaacado marnana anay ka yeelin in Itoobiya ay dixiri ku tarma ku abuurto wadankan Koonfur Afrika
Magacayada daba qoodhiga iyo wixii ka soo kordha kal socda halkan.
Omar jigjiga ONA/KA.
War kaasaa Igala!! Sidaas Reer JOKA baa laga rabaa meel walba waana in jiifl=ka loo diidaa Dabadhilifka
JOKA allaah ha idinku guuleeyo, haka daba hadhina D.qodhiga.
sidii hada ka horba aad ugu guulaysateen ayaad eegana uga guulaysanhaysaan insha allaah.
guulaysta JOKA guulana ha idinla jiro